URamaphosa usefuna ukuthatha izintambo ekubeni wumengameli wakuleli | News24
URamaphosa usefuna ukuthatha izintambo ekubeni wumengameli wakuleli
eGoli - Abalandeli bakaMengameli we-ANC uCyril Ramaphosa bamhlahlela indlela yokuba athathe izintambo njengomengameli wakuleli emasontweni ambalwa azayo.
Bahlela ukuthi kube nguyena owethula inkulumo kaMengameli wezwe ethulwa njalo ngoFebhruwari.
URamaphosa kumele akucubungule kahle lokhu ngoba ukugudluza uJacob Zuma ezikhundleni sakhe kungadala uqhekeko olukhulu kuleli qembu, futhi kube nokukhulu ukuthukuthela okuqhauma esifundazweni sakwaZulu-Natal nokuyisona eseseka kakhulu uMengameli.
OLUNYE UDABA:Luzoqalwa phansi uphenyo mayelana nezinsolo ezibekwe uDe Lille
Uqhekeko lungabonakala nakwezinye izifundazwe kulabo abebeseka uNkosazana Dlamini-Zuma kwesokuba wuMengameli wale nhlangano.
Lokhu ngeke kufane nalokhu okwenzeka ngoSepthemba 2008 ngesikhathi abe-ANC begudluza uThabo Mbeki kwafakwa ibamba likaMengameli wezwe uKgalema Motlanthe izinyanga ezingu-8 kwaze kwayiwa okhethweni lezwe, kulokhu bafuna uRamaphosa, asheshe azithathe izintambo.
Ubuholi be-ANC buvakashele eKZN ngeSonto njengoba bememe neSilo samabandla onke uGoodwill Zwelithini ngethemba lokuthi bazokuba nanomhlangano okhethekile noZuma.
Kulindeleke ukuba kudingidwe eyokuba uZuma azehlele ngokwakhe esikhundleni, kungakashayi usuku lomhlangano wobuholi bukazwelonke ngoLwesithathu.
NgoMsombuluko, lobu buholi buzohambela emathuneni oMengameli baphambilini iNkosi u-Albert Luthuli, John Langalibalele Dube noJosiah Gumede lapho beyobeka khona izimbali zezikhumbuzo.